Lixabiso Sheet metal iindawo laser ukusika mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Sebenzisa umqadi we-laser ene-high-power to radiation the material to cut, ukuze izinto zikhawuleze ukufudumeza kubushushu bomphunga, kwaye ziphume zenze imingxunya. Njengokuba umqadi uhamba kwizinto eziphathekayo, imingxunya ngokuqhubekayo yenza izilayidi ezinobubanzi obumxinwa kakhulu (malunga ne-0.1 mm). Gqiba ukusika umbandela.
Inkqubo yokucheba i-laser yesinyithi-izixhobo zesinyithi ezichanekileyo
I-Ouzhan ikunika uluhlu lwesicelo sephepha lokusika i-laser umatshini: i-aerospace, ukwakhiwa kweenqanawa, oomatshini bezolimo, oomatshini bokuchaneka, izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo, izixhobo zonyango, izixhobo zomzimba, ifanitshala kunye nezixhobo zasendlini, izixhobo zasekhitshini, izixhobo zombane, izibane nezibane, izikrini, ubugcisa besinyithi, i-aluminium Ingqakaqha, udonga lwe-aluminium, ikhabethe lombane, ishishini leemoto, ishishini lentengiso, iphepha lesinyithi eliqhubayo kunye namanye amashishini. Umatshini wokusika we-laser unokuqhubekeka: intsimbi yekhabhoni, intsimbi engenasici, intsimbi yesilicon, intsimbi yasentwasahlobo, isinyithi se-alloy, ingxubevange ye-manganese, i-titanium alloy, i-aluminium, i-aluminium ingxubevange, ipleyiti yealuminium, ipleyiti ebunjiweyo, ipleyiti ye-electrolytic, ipleyiti yokuchola, ubhedu kunye nezinye izinto.
Izinto eziluncedo Ouzhan sheet metal iindawo laser ukusika
-Ukuqhubekekiswa ngaphandle konxibelelwano
- Uhlengahlengiso oluncinci lwezilayidi ezimxinwa
-Umbala omsulwa kakhulu
- Ukuxinana okuphezulu kwamandla
- Icocekile, ikhuselekile kwaye ayinangcoliseko
Inkonzo yokusika i-laser yensimbi ye-Ouzhan ye-OEM yomatshini wokusika we-China wensimbi yesinyithi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, iphepha lokusika iphepha le-laser elinomgangatho ophezulu kwaye linokuthenjwa linokuqhubekiswa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwephepha lesinyithi somatshini wentsimbi ye-laser. Ukongeza, imveliso sheet laser ukusika sheet kubonelelwe ngokungqinelana ngqo nemigangatho esemgangathweni kwaye zingasetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo mveliso. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngexabiso lokusika iphepha kunye nokusika kweemveliso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Izinto eziluncedo sheet laser ukusika
⑴ Sebenzisa inkqubo yokusika i-laser enamacala amathathu okanye ukumisela irobhothi yemizi-mveliso ukusika amagophe endawo, phuhlisa isoftware enamacala amathathu yokusika ukukhawulezisa inkqubo ukusuka ekuzobeni ukuya kwiindawo zokusika.
To Ukuze kuphuculwe ukusebenza kwemveliso, uphando kunye nokuphuhlisa iinkqubo ezahlukeneyo zokusika, iinkqubo zokudlulisa izinto, iinkqubo zokuqhuba iimoto, njl., Isantya senkqubo yokusika idlule kwi-100m / min.
To Ukwenzela ukwandisa ukusetyenziswa koomatshini bobunjineli, ishishini lokwakha iinqanawa, njl., Ubunzima bokusika isinyithi esincinci sekhabhoni bugqithile kwi-30mm, kwaye kugxilwe ngokukodwa kuphando lwenkqubo yetekhnoloji yokusika i-carbon yentsimbi encinci kunye ne-nitrogen ukuphucula umgangatho wokusika wokusika iipleyiti ezityebileyo. Ke ngoko, ukwandisa intsimi yesicelo sokwakha i-CO2 yokusika i-China e-China kunye nokusombulula iingxaki zobuchwephesha kwizicelo ezitsha zisabalulekile kwizihloko zeenjineli kunye namagcisa.
Zithini izicelo zentsimbi yentsimbi yokusika i-laser
Ukusika -Metal: Ukusika i-Laser kunokufumana ukucoceka okucocekileyo, okugudileyo kunye nokuqina kunokuqhubekeka ngomatshini. Njengomatshini, inokucwangciswa kwaye ikhokelwe yikhompyuter, oko kuthetha ukuba umatshini wokusika we-laser unokuvelisa ngokuzenzekelayo inani elikhulu lezinto zesinyithi kumashishini anjengeemoto kunye neekhompyuter.
Isinyithi esibonakalayo: Ukukhanya okubonisiweyo akuyi konakalisa intambo ebonakalayo. Izinyithi ezinje ngealuminiyam, isilivere, ubhedu, kunye negolide konke kuyabonakalisa kwaye kubalulekile kwimveliso yeemoto kunye neyeemiconductor.
INzululwazi yezoNyango: Ukusika i-Laser kukwadlala indima ebalulekileyo kwishishini lezonyango. Kwimveliso yezonyango, ukuchaneka okuphezulu kakhulu kunye nokunyamezelana okungqongqo kubalulekile. Ngenxa yesidingo seshishini lezonyango kwimveliso ephezulu, obu buchwephesha buhlangabezana neemfuno zabo kuba bunokuphinda uyilo, zombini ngokuchanekileyo nangokukhawuleza.
Iindidi ezininzi zezixhobo zonyango zivela ekusikeni i-laser, ukusuka kwizixhobo zentliziyo nakwimithambo ukuya kumacandelo okufakelwa kotyando. Ngokusika i-laser, ezi zixhobo zinokwenziwa ngesantya esiphezulu ngaphandle kokubingelela ngokuchaneka.
Izinto eziluncedo Ouzhan sheet metal laser ukusika inkonzo
- Yonke into echanekileyo yokusika i-laser yentsimbi ixhomekeke ekuhlolweni okungqongqo komgangatho.
- Ngokutsho imizobo okanye iisampuli ngqo sheet metal laser ukusika imveliso.
Egqithileyo Sheet sheet OEM ukugoba
Okulandelayo: Icandelo lokusika i-laser yensimbi